Noho ny lalàna manohitra ny fifindra-monina, miha-mihena ny sehatra ho an’ny fiarahamonim-pirenena ao Hongria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2018 6:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, Italiano, English
Peta-taratasy “Fikambanana manohana ny fifindramonina” (“Bevándorlást támogató szervezet” amin'ny teny hongroà) napetak'ireo mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana teo amin'ny varavaramben'ny foiben'ny Komity Helsinki hongroà ao Budapest tamin'ny 27 jiona 2018. Sary avy amin'ny HHC, nahazoana alalana.
Miatrika fiampangana mielipatrana manameloka ireo vondrona manampy mpifindra-monina ireo lalàna vaovao nolanian'ny parlemanta ao Hongria vao haingana.
Anisan'ny nanameloka izany farany ny Vaomiera Eoropeana ho an'ny Demaokrasia mandalo Lalàna (antsoina koa hoe Vaomieran'i Venise, izay toerana ivoriany), ary sampana mpanolo-tsaina ao amin'ny Filankevitr'i Eoropa momba ny raharahan-dalàmpanorenana. Manoro hevitra ireo firenena mpikambana izy, anisan'izany i Hongria, mikasika ny fomba hitondrana ny rafitra ara-dalàna hifanaraka amin'ny fenitry ny demaokrasia Eoropeana, ny zon'olombelona ary ny fampanjakàna ny lalàna.
Nanapa-kevitra ny vaomiera fa ny lalàna manohitra ny fifindra-monina dia “manitsakitsaka ny zon'ny fahalalahan'ny fikambanana sy ny fanehoan-kevitra” ka tokony hoesorina.
Ankoatra ireo zavatra hafa, manangana heloka bevava vaovao antsoina hoe “mampisy fifindra-monina tsy ara-dalàna” izay mety ahitana fanomezana toro-hevitra ara-pitsarana sy fampahalalana momba ny zo sy andraikitry ny mpifindra monina ny lalàna, izay mety maha-voasazy herintaona an-tranomaizina
Nametraka hetra 25 isanjato an-katerena amin'ny fanomezana avy any amin'ny FTMF (ONG) any ivelany izay manohana ny mpifindra-monina any Hongria ihany koa izy ireo .
Araka ny filazan'ny Mpanara-maso ny Zon'olombelona, raha manasonia ny volavolan-dalàna ny filoham-pirenena Hongroà, “dia azo henjehina sy hogadraina hatramin'ny herintaona ireo mpiaro ny zon'olombelona sy mpilatsaka an-tsitrapo manomboka ny 1 Jolay, noho ny fanomezana tolotra, toro-hevitra sy fanohanana ireo mpifindra monina sy mpitady fialokalofana.”
Nomena anarana hoe “Sakano i Soros” ny fitambaran'ny lalàna, manondro ilay mpanefoefo Amerikana teratany Hongroà, George Soros, izay nahatonga azy ho lasibatry ny teorian'ny teti-dratsy izay mamaritra azy ho ati-doha mikotrika amin'ny fandringanana an'i Hongria sy ny kristianisma ny asa soa liam-pivoarana ataony. (Fanamarihan'ny tonia: mpanohana ny y Global Voices ny Fikambanana Open Society, anisan'ny tambajotra Soros.)
Tontolo miharatsy hatrany ho an'ny fiarahamonim-pirenena
Niharatsy hatrany ny tontolo ho an'ny fiarahamonim-pirenena sivily ao Hongria tato anatin'ny taona vitsy, ary ny lalàna “Sakano i Soros” no farany amin'ireo andiam-panavaozana ara-politika any Hongria izay mikendry hampitombo ny herin'ny governemanta ho fahavoazana ho an'ireo fifandaminana tsy miankina amin'ny fanjakana (FTMF=ONG ).
Ny tatitra momba ny zon'olombelona taona 2017 nomanin'ny Departemantam-panjakana Amerikana dia nanasongadina fa nandany lalàna i Hongria tamin'io taona io izay nitaky amin'ireo “ONG mahazo 7.2 tapitrisa forints (26.000 dolara Amerikana) isan-taona amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany mba hisoratra anarana ho toy ny fikambanana vatsian'ny vahiny ara-bola ary hamoaka ny “satan'izy ireo “vatsian'ny vahiny ara-bola” ao amin'ny tranokalan'izy ireo sy ny gazetin'izy ireo” ankoatra ireo adidy hafa ara-tatitra tsy maintsy atao.
Ireo fepetra vaovao napetraka tao anatin'izany lalàna izany, araka ny voalazan'ny Vaomiera Eoropeana, dia “manavakavaka sy miteraka enta-mavesatra amin'ny adidy ara-panjakana sy ny lazan'ireo fikambanana ireo.”
Araka ny tatitra momba ny zon'olombelona ao amin'ny departemantam-panjakana, “namarana fifanaraham-piarahamiasa hatry ny ela niaraka tamin'ireo fikambanana tsy miankina sasany” nandritra ny taona 2017 ny “governemanta, indrindra fa ireo izay tafiditra amin'ny fanaraha-maso ny asa mifandraika amin'ny zon'olombelona, ​​raha nanambara kosa ny filoha lefitry ny antokon'ny fitondrana, Fidesz fa tsy maintsy “roahina” ireo ONG tohanan'i George Soros.
Nanamarika ihany koa izy fa “matetika lasibatry ny fanafihan'ny haino aman-jerim-panjakana ireo FTMF (ONG) izay voakasiky ny lalàna,” raha mihevitra kosa ireo mpiasan'ny ONG fa fitarihana herisetra ny fanambaran'i Nemeth.
Tamin'ny fotoana izay, ONG Hongroà180 mahery no nanohitra ny lalàna, izay heverin'izy ireo fa “manilikilika” satria midika izany fa “mampidi-doza ho an'ny firenena izy ireo” ary “manohintohina ny fifampitokisana amin'ny fiarahamonina ary mametra-panontaniana momba ny zo haneho hevitra malalaka”. “Manakivy ny Hongroà tsy hanangana ONG manokana hanohanana ny tetikasa eo an-toerana” ny fiantraikan'ireo hetsika ireo ary hanakana ny asan'ny sehatra sivily amin'ny fomba mitovy tamin'ny nataon'i Rosia tamin'ny taona 2011 sy 2012.
Araka ny hevitry ny Vaomiera ao Venise mikasika ny lalàna vaovao “Sakano i Soros”, “tsy ao ary mifanohitra amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ny fanenjehana ho heloka bevava ny fanampiana an-tsitrapo ireo mpifindra-monina tsy ara-dalàna.”
Na dia izany aza, voalaza fa “handroso lavitra noho izany” ireo satria ny fitambaran'ny lalàna dia “manameloka ireo hetsika ara-pikambanana izay tsy mifandray mivantana amin'ny fananganana ny fifindramonina tsy ara-dalàna” ka “miteraka fanenjehana heloka bevava ho an'ny olona sy ny fikambanana izay manome fanampiana ara-dalàna ho an'ny mpifindra monina. “
Naneho hevitra ireo mpanao gazety maro sy mpikatroka amin'ny fiarahamonim-pirenena any Hongria sy manerana an'i Eoropa, mampitandrina fa toa anisan'ny tetikady lehibe kokoa mba hanakanana sy hanaraha-maso ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatry ny haino aman-jery ireo lalàna vaovao. Mpanao gazety Amerikana-Israeliana-Hongroà, Lili Bayer nisioka hoe:
Tadidio fa: ny governemanta ao Hongria dia mikendry ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, tsy noho ny fiahiahiana momba ny fifindramonina, fa noho i Hongria bitika ary toa ireo ONG ireo ihany no hany miasa ho an'ny zon'ny olom-pirenena Hongroà: mijery ny fanararaotana ataon'ny mpitandro filaminana, misolo tena ny mpanao fihetsiketsehana eny amin'ny fitsarana, sns.
Fampitahana amin'ny Eoropa taonjato faha-20
Ny sasany kosa nanao fampitahana teo amin'ireo fivoarana ireo tany Hongria sy ireo tsy rariny ara-dalàna nataon'ireo fitondrana tamin'ny taonjato faha-20 tany Eoropa Afovoany sy Atsinanana. Ohatra, mpanoratra Serbiana sady bilaogera, Igor Čobanović nisioka hoe:
“Nandany lalàna manameloka ny fanampiana ireo mpifindra-monina i Hongria.”
Napetrak'i Adolf Hitler ny karazan-dalàna tahaka izany ary nikasika ny fanampiana ny Jiosy
Nanao fampitahana hafa ireo mpanohana ny politikan'ny governemanta Hongroà manohitra ny fifindramonina sy manohitra ny fiarahamonim-pirenena .
Ny 12 Jona, nametraka taratasy apetaka teo amin'ireo fidirana amin'ireo tranobe izay mampiantrano fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miara-miasa amin'ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana ny mpikambana ao amin'ny Antokom-bahoaka Demokratika Kristianina (KDNP). Hoy ny vakin'ny taratasy apetaka: “Fikambanana manohana ny fifindra-monina” (“Bevándorlást támogató szervezet,” amin'ny teny Hongroà).
Tao anatin'ny tranga iray niparitaka be, nikendry ny biraon'ny FTMF na ONG iray antsoina hoe Menedék, izay manampy amin'ny fampidirana ireo mpitsoa-ponenana izay neken'ny governemanta Hongroà ity fanentanana ity. Trano kintana mavo ilay tranobe, anisan'ny tambajotran'ny Ady Lehibe II izay nisy toerana tsy maintsy nipetrahan'ireo Jiosy 220 000 tao Budapest, izay novonoin'ireo mpiara-miasa Nazi tamin'ny taona 1944. Samy voatery nampiseho kintana mavo ny trano sy ny mponin'izy ireo. Taorian'ny ady, natao tamin'ny takelaka fahatsiarovana na takelaka varahina niaraka tamin'ny anaran'ireo namoy ny ainy tamin'ny Fandripahana izay nipetraka tao amin'ilay trano ny ankamaroan'izy ireo.
Lasibatra hafa amin'ity fametahana anarana ity ny Komity Helsinki Hongroà, izay miasa amin'ny fiarovana sy fampiroboroboana ny zon'olombelona. Nisioka mivantana ireo mpikambana ao aminy, raha nametaka “sticker” nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety teo anoloan'ny tranoben'izy ireo tamin'ny 27 Jona ny Fidelitas (sampan'ny tanora ao amin'ny antoko Fidesz).
Nahazo ny fitsarana an-tendrony taratasy araikitra anti-FTMF-ONG izahay ankehitriny! Valan-dresaka amin'ny mpanao gazety mivantana amin'izao fotoana izao eo anoloan'ny tranonay.
Na dia tsy mihatra mivantana aza ny hevitry ny Vaomieran'i Venise, dia manome antony ara-dalàna ho an'ireo hetsika hafa eo amin'ny sehatra nasionaly sy Eoropeana. Ny 25 Jona, ohatra, maro an'isa tamin'ny Komity misahana ny raharaha anatiny sy ny fitsarana (rariny) ao amin'ny Parlemanta Eoropeana no nifidy ny fanovana ilay antsoina hoe Andininy faha-7 eo amin'ny Vondrona Eoropeana manohitra an'i Hongria, izay mety hiteraka sazy noho ny tsy fampiharana ny soatoavin'ny Vondrona Eoropeana .